अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको एक्लाएक्लै वार्ता सम्पन्न, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको एक्लाएक्लै वार्ता सम्पन्न
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वर उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीचको बुहप्रतीक्षित एक्लाएक्लै वार्ता सिंगापुरमा सम्पन्न भएको छ। भेटवार्ता सम्पन्न भएपछि उत्तर कोरियाली नेता किमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अंग्रेजीमा ‘आइस टू मीट यू, मिस्टर प्रेजिडेन्स’ भएका थिए। सिंगापुरको सेन्टोसा द्वीपमा अवस्थित आइल्याण्डको कापेला होटल भएको ऐतिहासिक वार्ताले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
आगामी दिनमा यो वार्ताले एसियाकासाथै विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ। बैठक नेपाली समय अनुसार ६ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु भएको थियो। एकअर्का विरुद्ध मिसाइल प्रहार गर्ने र खुला रुपमा परमाणु युद्धको धम्की दिने विश्वका यी दुई ठूला मुलुकका नेताको यो भेटघाटले नयाँ युगको सुत्रपात गरेको छ।
दुवै नेताबीचको यो वार्ता एकान्तमा भएको थियो। सो भेटवार्तामा ट्रम्प र किम बाहेक दोभाषे मात्र उपस्थित थिए। दुवै नेताले व्यक्तिगत मतभेदका विषयमा छलफल गर्नुका साथै दुवै देशको द्विपक्षीय मुद्दामा पनि छलफल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। वातापछि आजै दुवै नेता दिवाभोजमा सहभागी हुँदैछन्।
नेपाली समयअनुसार मंगलबार विहान ६ बजेर ५५ मिनेटमा एकअर्काको अभिवादन गरेका थिए। यस क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुने अपेक्षा गरेको बताएका थिए। अभिवादनका क्रममा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘हामी पुराना मतभेद भुलेर नयाँ सम्बन्धको सुरुवात गर्दैछौं।’ उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भने, ‘तमाम बाधा व्यवधानलाई चिर्दै हाम्रो भेट भएको छ। किनभने आपसमा मिल्नु सजिलो काम थिएन।’
्सिंगापुरले यो बैठककालागि निकै राम्रो तयारी गरेको थियो। एक अनुमानका अनुसार यो वार्ताकालागि करिव १०० करोड खर्च भएको छ। किम जोङ उनले सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सीनसँगको कुराकानीका क्रममा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको यो ऐतिहासिक वार्तालाई पूरै विश्वले हेरिरहेको बताएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्प किम जोङ उनसँगको भेटवार्तालाई लिएर निकै उत्साहित थिए।